Maskaxdii Ka Dembeysay Aasaaskii UFFO!!!! Marxuum Dr. Aadan Yuusuf Abokor? | Hayaan News
Maskaxdii Ka Dembeysay Aasaaskii UFFO!!!! Marxuum Dr. Aadan Yuusuf Abokor?
Hargeysa(Hayaannews): Alle ha u Naxariistee Dr. Aadan Yuusuf Abokor waxa uu Hormood ka ahaa aqoonyahanka reer Somaliland ee xoreyntii dib u dhiskii, ee waqtigoodii, waxbarashadii iyo wax-tarkoodiiba u horay Jamhuuriyadda Somaliland. Waxuu ka mid ahaa dhalinyaradii mutadawiciinta ahaa ee xabsiga dheer u galay wax-u-qabashada dadkooda, ka dib markii ay isu baysteen xal-u-helista iyo maaraynta xaalado nololeed oo aad u qallafsanaa oo waqtiyadaa ku habsaday dadkii reer Somaliland ee xilligaa joogay. Isaga oo ka mid ahaa dhalinyaradii UFFO ee sannadkii 1982-kii tacaddiga iyo xadhiga la isugu daray, markii uu damiirkoodu siin waayay inay ka joogsadaan xaaladdii ay dadkoodu ku sugnaayeen, ka dib markii taliskii waagaa jiray ee Siyaad Barre uu gabay xilkii ka saarnaa goboladdii waqooyiga ee maanta Somaliland ah.
waa kuma Dr. Aadan Yuusuf Abokor? Dr. Aadan sannadkii 1946-kii ayuu ku dhashay magaalada Hargeysa, isaga oo 3 jir ah ayaa loo qaaday magaalada Cadan ee dalka Yamen oo waalidkii degenaa. Halkaas ayuu ku qaatay waxbarashadiisii hoose, dhexe illaa sare. Isaga oo wax ka baran jiray Iskuulo ay dowladdu leedahay oo uu maamuli jiray gumaystihii ingiriiska, maadaama oo Yamen uu waqtigaa guumaysan jiray Ingiriisku.
Haddii aynu intaa ka soo gudubno, waxaynu hadda si toos ah u dhex muquuranaynaa qaybtii ugu muhiimsanayd ee nuxurka qoraalkeenna. Waxuu Dr. Aadan Allah ha u naxariistee oo si faahfaasan uga xog-warramayaa su’aal la xidhiidhay qaabkii loo xidh-xidhay kooxdii UFFO iyo sidii loo asaasay-ba, waxuuna ku jawaabay oo uu yidhi; “Waxa dhacday markii aanu halkaa wax marinaynay in aanaan joojin ee aanu halkaa shirarkayaga ka sii wadannay. Shirarkaasna kolkii danbe waxa aanu kaga hadli jirnay waxyaabaha cadaadiska ah ee lagu hayo waqooyiga haddii ay tahay xagga siyaasadda iyo dhaqaalahaba. Illayn berigaa Rajiimka dad badan ayaa u shaqayn jiray oo isugu jiray nabad-sugidda amma kooxii loo yaqaannay dhabar-jebinta iyo hay’ado badan oo sir-doon ah, wararkii illaa Xamar iyo taliskii Af-weyne ayay gaadheen.
Niman Wufuud ah oo Af-weyne uu Xamar ka soo diri-jiray kuna soo odhan jiray ‘soo dejiya reer waqooyigii wuu kacsan yahaye.’ Nimankaasi way yimaadaan oo way nala hadlaan, annaguna wixii waddanka ka jira ee dadku ka cabanayeen ayaanu ku dhiirannaa oo aanu u sheegnaa. arrimuhu waxa ay berigaa ku wanaagsanaayeen marka ay weftigu yimaadaan waxa ay odayaashu ku odhan jireen ‘Annaga dhalinyarada-yada ayaa noo hadlaysa oo sheegaysa wixii dhibaatooyin ah ee jira.’ Iyaguna may hadli jirin, annaguna waanu ku dhiiran jirnay oo qolaadaa ka socota Rajiinka Xamar wax walba waanu u sheegi jirnay ayuu yidhi.
Sannadihii 1981-82kii ayaa magaalada Hargeysa lagu xidhxidhay, oo lagu xukumay dil iyo xabsi dheer, kooxdii dhallinyarada ahayd ee loo yaqaanay UFO. Kolkii danbe waxa loogu beddeley dilkii xadhig ah 30 sannadood. Xadhigaas UFO waa dhinbiishii dabka qabadsiisay halgankii iskacaabbinta ee horraantii siddeetameeyada ee qarnigii tagay ka bilaabmay Somaliland. Dabkaasina waxa uu ka kacay doonitaanka dhabta ah in adeegyada bulshada oo ay ugu horreeyaan ka caafimaadka iyo ka waxbarashada wax laga qabto. Dr. Aadan Yuusuf Abokor waxa uu ahaa markaa dhakhtar, ahna Agaasimaha Cisbitaalka Hargeysa, isaga ayaana isugu yeedhay dhallinyaradii kale ee la faca ahaa, oo kala tashaday sidii Cusbitaalka wax loogu qaban lahaa. Waxa cad markaaba halka ay wax ka bilaabmeen inuu hoggaankeeda ka mid ahaa.
Kooxda UFO waxa lagu xidhay jeelkii Labaatan-Jirow oo ku yaallay geerigo’an cidla ah, oo Gobolka Baay ah. Jeelkaas oo uu Jarmalka Bari u dhisey dawladdii milleteriga ahayd, waxa uu ahaa meel ciqaab ifka ah loogu talo galay, jidh iyo maskax dilna u samaysan. Waxa jeelkaa soo maray dadka u xidhan siyaasadda iyo iscabbirka fikirkooda oo aanu kolkaa milleterigu midna raalli ka ahayn. Qof waliba waxa uu ku jiray qol yar oo 2x2m ah, oo aanu weligii xidhiidh aragti ah, iyo mid hadal ah toona, la lahayn kan kale ee godka ku xiga ku jira. Xilligaa adag ayuu Yuusuf Gaydh oo ka mid ahaa kooxda xidhxidhani sameeyey sanqadh gidaar garaac ah, oo sida dhiidhaada ah, oo ay sir ahaan ku xidhiidhaan, warkana isku waydaarsadaan.
Xilkasnimadii dhakhtarnimo ee Dr. Aadan kuma ay ekeyn xilligii uu Cisbitaalka Guud madaxa ka ahaa, ka hor intii aan la xidhin. Kolkaa ay godka ku jireen ee gidaarka ay wadaagayeen qolalka cidlada ah maxaabiista kale, Dr. Aadan waxa uu ku daweeyey saaxibbadii, gaar ahaan Maxamed Baaruud Cali, cilmi nafsi, waxana uu buuggii Anna Karenina ee Leo Tolstoy oo ka badan 800 oo bog, uga akhriyaya isaga oo gidaarka garaacaya, oo codkoodaa sirta dhiidhaada ahaa ugu gudbinaya. Sida Maxamed ba sheegay, taasi waxa ay ka dawaysay Dr Aadan saaxiibadii muragidii, wahabkii iyo cucubkii xabsiga lagu jirrabay waqtiga dheer.
Kolkii isaga iyo saaxiibadii ay mutaysteen waxaa ay xaqdarrada ku muteysteen, ee la soo daayay 1989kiina, Dr. Aadan wuxuu ahaa qoladii fursadda u heshay inay debedda u baxaan, degaan Yurub ama Maraykan, wuxuu se ka door bidey in uu soo noqdo oo uu halkii uu dabkii hore ku bakhtiyey, oo uu mid kale ka bilaabo. Adeeggii xilligii debedyaalka lagu ahaa Itoobiya ka dib, kolkii dalka lagu soo noqdey 1990kii, waxa Dr. Aadan markiiba ugu xigey asaaskii ururkii samafalka iyo dibudejinta ee Somali Relief and Rehabilitation Association (SORRA). SORRA, iyada iyo SOMRA, waxa ay ahaayeen hay’adihii aan dawliga ahayn ee dalka samafalka dhabta ah ka bilaabay. SORRA waxa ay cunto u qaybisey dadkii tabaalaysnaa, magaalada Hargeysa oo aad u burbursan oo miinadu ku aasantahay dhammaanteed, xashiishkuna goob kasta tuulan yahay, SORRA waxa ay mar kale nadiifisey dariiqyadii magaalada.
Kolkii xumaantu dhacday, 1993-94kii, ee dadku kala jabay, ee dagaallada sokeeye la galay, Dr. Aadan waxa uu ahaa hormuudkii ka badheedhay ee isaga tallaabayay una kala dab qaadayey labada daamood ee Hargeysa, una kacay si ummaddan caqliga Ilaahay mar uun ugu soo celiyo.
Dadkuse waxa ay inta badan aanay ogayn ururrada aan dawliga ahayn, ha noqdeen dalladaha dhallinyarada iyo ururrada kale ee bulshada, aasaaskooda badankooda, in uu Dr. Adan u ahaa, bud dhige , laf dhabar ah u ahaa.
Alle ha u Naxariistee Dr. Aadan Yuusuf Abokor
Innaa Lillaahi wa innaa ileyhi raajicuun. Allah naxariistii janno ha ka waraabiyo Marxuumka; ehelkii, asxaabtii iyo dhammaan ummadda Somaliland ee uu ka baxayna samir iyo iimaan ha ka siiyo.
Waxa aan ilaahay uga baryayaa in uu dambigiisa dhaafo oo cadaabul qabriga iyo cadaaabta aakhiraba ka badbaadiyo suaasha xaqa ahana ku ku sugo
Eng Faysal Cadami